युद्धको २५ दिन रुसले हाइरसोनिक मिसाइल प्रहार गर्‍यो, रास्ट्रपतिको अवस्था के छ ? — Imandarmedia.com
युद्धको २५ दिन रुसले हाइरसोनिक मिसाइल प्रहार गर्‍यो, रास्ट्रपतिको अवस्था के छ ?
एजेन्सी। रुस-युक्रेन यु’द्धको आज २५ दिन पुगेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक युक्रेनमा हाइरपसोनिक मिसाइल प्रहार गरेको जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म यति अत्याधुनिक हतियार प्रयोग नगरेको रुसले जनाएको छ।
युक्रेनमा सैन्य अप्रेशन जारी राख्ने भन्दै रुसले थप सैनिक र हतियारसहित पठाएको छ। रुसीले सेनाले युक्रेनी सेनाको ड्रोन गोदाममा हमला गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
युक्रेनका अधिकांश भूभाग कब्जामा लिएको रुसी सेनाले राजधानी किएभलाई घेराउ गरेको छ। रुसी सेनाले किएभलाई घेराउ गरेर भोलोदिमिर जेलेस्कीकी सत्ताबाट हटाउन वा नेटोको सदस्यता नलिने कानुन बनाउन दवाव दिइरहेको छ।
रुसी सेना युक्रेनको महत्त्वपूर्ण सहर मारिओपोलको केन्द्रमा पुगेको छ। मारिओपोलका नगरप्रमुखले भाडिम बोइचेन्कोले बीबीसीसँग सहरको केन्द्रमा सङ्घर्ष भइरहेको पुष्टि गरे। सहरको केन्द्र बाँकी छैन। सहरमा युद्धको प्रभाव परेको नदेखिने एउटा सानो ठाउँ पनि छैन, उनले भने।
रुसले युक्रेनमा अमेरिकी सहयोगमा रसायनिक हतियार बनाउने लागेको बताएको छ। रुसले अमेरिकाले युक्रेनमा १० स्थानमा जैविक हतियार बनाउने ल्याव परिक्षण गरिरहेको बताएको छ। तर यसको अमेरिका र युक्रेनले खण्डन गर्दै आएका छन्।
अमेरिकाले थप हतियार दिएपछि रुससँग वार्ता नगर्ने बताएका युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पुनः शान्ति वार्ताको लागि आह्वान गरेका छन्। रुसले हाइरपसोनिक मिसाइल प्रहारपछि जेलेस्कीले वार्ताको लागि आह्वान गरेको बताइएको छ।
रुसले विश्वको मै हुँ भन्ने र आफूलाई सुपरपावर ठान्ने अमेरिकालाई ठेगान लगाउने सामर्थय आफूसँग भएको बताएको छ। अमेरिकाको नामै नलिएर रुसका सुरक्षा परिषद्का उपसचिव दिमित्री मेदभेदेभले सो चेतावनी दिएका हुन्।
दिमित्रीले पश्चिमा देशहरु रुसलाई तहसनहस बनाउन डरलाग्दो किसिमले घृणा फैलाउने काम गरिरहेको तर यसले केही फरक नपर्ने समेत बताए। सन् २००८ देखि २०१२ सम्म रुसको राष्ट्रपति रहेका दिमित्रीले भने,
अमेरिकाले रुसलाई घुँडा टिकाउने प्रयास स्वरूप रुस विरोधी भावना फैलाउने घृणित काम गरिरहेको छ। यसले केही गर्न सक्तैन। रुससँग सम्पूर्ण शत्रुलाई आ–आफनो ठाउँमा राख्ने शक्ति छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार दिमित्रीले युक्रेनमा जारी सैन्य अभियान चाँडै सफल हुने समेत बताए। उनले आफ्नो देशको ठूलो क्षति भएको भन्दै फैलाइरहेको भ्रम सत्य नभएको दाबी समेत गरे। उनले सैन्य अभियान सफलताको साथ अघि बढिरहेको चाँडै पूरै युक्रेन नियन्त्रणमा आउने समेत दाबी गरे।
रुस–युक्रेन घटनापछि अमेरिका, युरोपेली संघ र अमेरिकाको एसियाली गठबन्धनले रुसी नेता, कम्पनी र व्यापारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट अलग्याएका छन्।
यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाले युक्रेनलाई प्रयोग गरेर रुसलाई तर्साउन खोजेकाले र युक्रेनमा रहेका रुसी भाषा बोल्ने वासिन्दाको आम नरसंहार हुन नदिन युक्रेनमा विशेष सैनिक अभियानका आवश्यक परेको बताएका छन्।
पुटिनले पश्चिमा जगतले रुसलाई तहसनहस पार्न खोजिएकोले आफ्नो देशले युक्रनमा सैन्य अभियान सुरु गरेको बताए ।पश्चिमा देशहरुले लगाएको प्रतिबन्धलाई आफ्नो देश र नागरिकले अबसरको रुपमा लिएको बताए।
उनले आफ्नो राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा यसले सहयोग गर्ने दाबी समेत गरे। साथै, रुसले सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि आफूले पश्चिमा जगतसँग गरेको सम्बन्ध विस्तार अब समाप्त भएको।
र अब आफूले अन्य शक्तिहरूजस्तै चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्ने जनाएको छ। अमेरिकाले चीनले रुसलाई साथ दिन सक्ने भन्दै त्यो नगर्न आग्रह गरेको छ।
आफूले युक्रेनलाई घातक हतियार पठाइरहेको चीनलाई आग्रहको कुनै अर्थ नरहेको बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म चीन कसैको पक्षमा पनि खुलेको छैन। उसले आगोमा इन्धन नथप्न अमेरिकालाई आग्रह गर्दै आएको छ।